Class Code : ICM-PURM-18-01
နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဦးမော့လာတာနဲ့အညီ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာကြနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ Purchasing and Supply Chain Management ကဏ္ဍတွင်လည်း Professionals များစွာ လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါသည်။ Purchasing ကဏ္ဍသည် Corporation ကြီးများတွင်ဖြစ်စေ၊ Small business တွင် ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆိုင်သောကဏ္ဍများတွင်ဖြစ်စေ မရှိမဖြစ်ပါဝင်ပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အဓိကပါဝင်နေပါသည်။
Purchasing and Supply Chain Management မှာ ဘာတွေသင်မှာလဲ။
Purchasing ကဏ္ဍကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေတဲ့ Organization တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော Procedure အဆင့်ဆင့်နဲ့ Supplier တွေဆီက ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ Quality ကောင်းမွန်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း တို့အပြင် ထိုပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ၊ Management လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာတွေကို သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Purchasing and Supply Chain Management ကို ဘယ်သူတွေတက်သင့်လဲ? ။
Purchasing and Supply Chain နယ်ပယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လိုသူများ၊ purchasing and supply chain နယ်ပယ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသော မန်နေဂျာများ၊ executive များ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် Purchasing and Supply Chain ကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားပြီး စတင်လေ့လာလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Institute of Commercial Management (ICM) သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နိုင်ငံပေါင်း (၁၃၀) ကျော်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကို ပညာများဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။
ယခု အချိန်တွင် အလုပ်တစ်ဖက် နှင့် မအားလပ်သော သူများအတွက် တက်သင့်သော သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိ လုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အထူးပြုလေ့လာ သင်ကြားနိုင်ပြီ လုပ်ငန်းခွင် အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
ICM Single Subject Diploma in Purchasing Management
ဘာသာရပ်တွင် သင်ကြားမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ
- Purchasing Management Course Outline
1. Evaluation of purchasing
3. Purchasing organization Structure
5. Purchasing & IT
6. HR in Supply Chain
7. Specifying and Assuring the Quality of Suppliers
8. Marching Supply & Demand
10. Contrasting approaches to Supply
11. Storing Supplies
13. Purchasing Performance
Institute of Commercial Management (UK) မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါက ICM Single Subject Diploma in Purchasing Management ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။